Nandrara Ny Lahatsary Fanadihadiana Momba Ny Tanora Mpikatroka Palestiniana Noho Ny ‘Fitantarana Mitongilana’ Ireo Manampahefana Ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2018 16:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, русский, فارسی, Français, عربي, Italiano, English
Noraran'ny governemanta Singaporeana ny fanadihadiana iray izay nifantoka tamin'ny fiainan'ireo tanora mpikatroka roa avy any Palestina noho ny fitrandrahana ny ady nisy teo amin'ny Palestiniana sy ny Isiraeliana “tsy nisy fandanjalanjana.”
Nivoaka tamin'ny taona 2016 ny “Radiance of Resistance” (Ny Famirapiratan'ny Fifaharana) izay novokarin'ny mpanatontosa sarimihetsika Amerikana Jesse Roberts. Fantatra fa nokasaina ho alefa tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Palestiniana ao Singapaoro nandritra ny herinandro voalohan'ny volana Janoary 2018 izany, saingy nesorina taorian'ny filazan'ny Manampahefana misahana ny Seraseran'ny Fampahalalam-baovao (IMDA) ho toy ny “voarara amin'ny sokajy rehetra”.
Nasongadina tao amin'ny vaovao tamin'ny volana Desambra 2017 i Tamimi taorian'ny nanamelohana azy ho namelaka miaramila Israeliana iray. Tratra tao amin'ny lahatsary ity fihetsika ity ary vetivety dia niparitaka. Mbola miantona ilay raharaha momba azy amin'izao fotoana..
Tsy fantatra raha toa ka avy amin'ity raharaha nalaza be tamin'ny fampitam-baovao ity no nahatonga ny fanapahan-kevitry ny IMDA , saingy ny fanambaràny izay nanazava ny fanapahan-kevitra tamin'ny fandrarana ilay fanadihadiana dia nanasongadina ny “fitantarana mitongilana” tao amin'ilay lahatsary:
Manana fifandraisana tsara i Singapaoro sy i Israely. Mandritra izany fotoana izany, manana fifandraisana am-pirahalahiana miaraka amin'ny Manampahefana Nasionaly Palestiniana i Singapaoro. Tamin'ny taona 2017, nilaza ny praiminisitra Singapaoreana Lee Hsien Loong fa “olana mampihetsim-po” ny fifandonana Israeliana-Palestiniana indrindra ho an'ny Miozolomana. Nanamarika izy fa manana mponina Miozolomana maro ireo mpifanolo-bodirindrina amin'i Singapaoro ao amin'ny faritra Azia Atsimo-Atsinanana ary manana Miozolomana marobe ihany koa ny firenena. Ny fananganana fiarahamonina manana foko mirindra maromaro no iray amin'ireo fitsipika fototra napetrak'i Singapaoro .
Ao amin'ny pejiny Facebook, namaritra ny fanapahan-kevitry ny governemanta ho toy ny sivana ireo mpanatontosa ny “Ny Famirapiratan'ny Fifaharana” :
Nanohitra ny fanehoan-kevitry ny IMDA ilay mpanakanto Singapaoreana Alfian Sa'at :
Nilaza ireo mpikarakara ny fetiben'ny sarimihetsika fa diso fanantenana izy ireo tamin'ny fandraran'ny IMDA ny fandefasana ho an'ny daholobe ilay horonantsary fanadihadiana, saingy nanapa-kevitra ny tsy hanao fangatahana izy ireo noho ny tsy fisian'ny fotoana.